တရုတ်သုံးဆင့်အီလက်ထရောနစ်စွမ်းအင်မီတာ （လေယာဉ်တင်သင်္ဘော, Lora, gprs） ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်း | ချွေတာ
သုံးဆင့်ပါ ၀ င်သော ၀ ါယာကြိုးသုံးခုပါ ၀ င်သောသုံးကြိုးသုံးမီတာစွမ်းအင်မီတာသည်ကြီးမားသောပေါင်းစပ်ထားသော circuit ကိုအသုံးပြုပြီးမြင့်မားသောတိကျသောစွမ်းအင်တိုင်းတာခြင်းချစ်ပ်ကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်း၏ carrier module ၏ဆက်သွယ်နိုင်စွမ်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုတို့သည်လည်းကျယ်ပြန့်သောလက်တွေ့ကျသောအသုံးချမှုကိုရရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ဒစ်ဂျစ်တယ်နမူနာထုတ်ယူခြင်းဆိုင်ရာနည်းပညာနှင့် SMT လုပ်ငန်းစဉ်ကိုကျင့်သုံးပြီးစက်မှုအသုံးပြုသူများ၏အမှန်တကယ်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုအရဒီဇိုင်းဆွဲထုတ်လုပ်သည်။
၂။ Active & Reactive စွမ်းအင်တိုင်းတာခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်များ၊ အချိန်၊ အချက်ပြနံပါတ်စသည်ဖြင့်ဖော်ပြနိုင်သည်။
၄။ စွမ်းအင်မီတာသည်အမြောက်အများအကောက်ခွန် (variable rate) ကိုအသုံးပြုသည်
6. ဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်း: RS485, အနီအောက်ရောင်ခြည်
carrier carrier လှိုင်းသည် power line ကွန်ယက်မှတစ်ဆင့်အခြား wire ကိုဆွဲရန်မလိုပဲဆက်သွယ်သည်။
မြင်ကွင်းကျယ်ထောင့်နှင့်မြင့်မားသောဆန့်ကျင်ဘက် LCD မျက်နှာပြင်ဖြင့်ပြသပါ
2. ဒီဂျစ်တယ်အပြောင်းအလဲနဲ့နည်းပညာနှင့် SMT ဖြစ်စဉ်ကိုသုံးပါ။
၄။ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက် - တိုင်းတာခြင်းနှင့်ထောက်လှမ်းခြင်း၊ အခကြေးငွေထိန်းချုပ်ခြင်း၊ လုံခြုံရေးလက်မှတ်နှင့်စာဝှက်ခြင်း၊ ပြသခြင်း၊ အဖြစ်အပျက်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ အေးခဲခြင်း၊ အချိန်ကိုက်ခြင်း၊
5. မန်းဂနိစ်ကြေးနီ shunt နှင့် NB module တစ်ခု:
လက်ရှိတွင်မြင့်မားသောတည်ငြိမ်ပြီးကျယ်ပြန့်သောမန်းဂနိစ်ကြေးနီ shunt ပါသောကွင်းဆက်ကိုအသုံးပြုသည်။
NB module - IoT ဆက်သွယ်ရေးဆက်သွယ်မှု၊ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းသည်။ မြင့်မားသောကွန်ယက်ဆက်သွယ်မှုလိုအပ်ချက်များရှိသည့်ကိရိယာများအတွက်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ဆက်သွယ်မှုများကိုထောက်ပံ့သည်
6.Carrier module - နောက်ထပ်ကြိုးတွေမလိုဘဲ power line networking ကနေတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်ပါ။
Lora module - အဝေးမှကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်ဆက်သွယ်ခြင်း။
GPRS module - မိုဘိုင်းအများသုံးကွန်ယက် (2G network) ။
၇။ ကဒ်ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်း - CPU ကတ်၊ ယုတ္တိဗေဒစာဝှက်စနစ်ကဒ် / SD ကဒ်။ RS485, အနီအောက်ရောင်ခြည်, ပါဝါလိုင်းလေယာဉ်တင်သင်္ဘော
၈။ သတင်းအချက်အလက်ပြပါ။ လက်ရှိလနှင့်နောက်ဆုံးလတွင်စုစုပေါင်းလျှပ်စစ်သုံးစွဲမှု၊ စုစုပေါင်းလျှပ်စစ်စွမ်းအင်ညွှန်ပြမှုတန်ဖိုးနှင့်စုစုပေါင်းစုဆောင်းထားသောလျှပ်စစ်စွမ်းအင်ညွှန်ပြမှုတန်ဖိုး၊ လက်ရှိနေ့စွဲနှင့်အချိန်၊ အချက်ပြကုဒ်သို့မဟုတ်အချက်ပြ၊ ဆက်သွယ်မှုအခြေအနေအချက်ပြ၊ လျှပ်စစ်မီတာမီတာနံပါတ်၊ စသည်တို့
9.Metering chip နှင့် NB module: မီတာပြားဆိုသည်မှာနှစ်ဖက်သက်ဝင်လှုပ်ရှားသောစွမ်းအားနှင့်လေးကွမ်ထန်းဓာတ်ပြုစွမ်းအင်ကိုတိုင်းတာရန်အသုံးပြုသည်။ ဗို့အားနမူနာကွင်းဆက်သည်ခံနိုင်ရည်ဗို့အားကိုခွဲခြမ်းသည်။
built-in 10.Optional function- switch ကို
optional direct access type (သို့) Transform access type၊ built-in optional function- switch
switch built-in: အသေးစား circuit breaker ကိုမီတာအတွင်း၌တပ်ဆင်ပြီးမီတာကိုပေါင်းစပ်ထားပြီးအားသာချက်များ - ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံနှင့်စျေးပေါသောစျေးနှုန်း
ပြင်ပ 11.Optional function ကို - switch ကို
တိုက်ရိုက်ရွေးချယ်ခွင့်အမျိုးအစား (သို့) ထရန်စ်တာသုံးအမျိုးအစား၊ ပြင်ပရှိလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်ခလုတ်ခုံ
switch external: သေးငယ်သော circuit breaker အားသီးခြားစီသတ်မှတ်သည်၊ လျှပ်စစ်မီတာသည် control terminal မှတစ်ဆင့် external circuit breaker ၏အဖွင့် / ပိတ်ခြင်းကိုထိန်းချုပ်သည်။
အားသာချက်များ - external circuit breaker၊ ပြင်းထန်သော current interrupt၊ ပျက်စီးရန်မလွယ်ကူပါ။
ကိုးကားစရာဗို့အား3× 220 / 380V
လက်ရှိသတ်မှတ်ချက် ၃ × ၁.၅(6)က× ၃ × ၅(20)က、3× 10(40)က× ၃ × ၅(60)က、3× 20(80)က
တိကျမှန်ကန်မှုအဆင့် Active Level 0.5၊ တုံ့ပြန်မှုအဆင့် ၂၊ 0.5 စက္ကန့် / တစ်ရက်
စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု ဗို့အားလိုင်း: <= 1.5W, 5VA; လက်ရှိလိုင်း: <1VA
အပူချိန်အကွာအဝေး အလုပ်လုပ်သောအပူချိန်အပိုင်းအခြားသည် -25 ~ 55 ဒီဂရီဖြစ်ပြီး၊ အလွန်အမင်းအလုပ်လုပ်သောအပူချိန်အကွာအဝေး -40 ~ 70 ဒီဂရီ
မီတာကိန်းသေ (imp / kWh) 6400,400,240
ဆက်သွယ်ရေး RS485: 2400bps Infrared: 1200bps DL / T645-2007
လျှပ်စစ်မီတာကိုမီတာသေတ္တာနှင့်တပ်ဆင်ပြီးဝါယာကြိုးပုံအရ interface ကိုဆက်သွယ်ပါ။ ဒါဟာကြေးဝါဝါယာကြိုးသို့မဟုတ်ကြေးနီ terminal ကိုသုံးစွဲဖို့အကြံပြုသည်။ ဆက်သွယ်မှုညံ့ဖျင်းခြင်းသို့မဟုတ်အလွန်အကျွံပါးလွှာသောဝါယာကြိုးများကြောင့်မီးလောင်ခြင်းကိုရှောင်ရှားရန် terminal box ရှိ screw နှစ်ခုကိုတင်းကျပ်သင့်သည်။
သုံးဆင့် Ic ကဒ် Smart Prepaid စွမ်းအင်မီတာ
သုံးအဆင့် Kwh မီတာ